Man United oo Qorshe Cusub Ku Doonayso Harry Maguire, Maxay tahay
Ramzi Yare	 Jul 18, 2019
Kooxda kubada cagta ee Man United ayaa qorshe cusub oo ay doonayso in uu u Sahlo helitaanka saxiixa daafaca kooxda Leicester City ee Harry Maguire inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan kala soo wareegto. Manchester United ayaa ku…
Badrudiin Mohamed	 Jul 18, 2019
Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa ku dhawaaqday inay la soo wareegtay xiddigii naadiga Tottenham ee Kieran Trippier. Dambeedka midig ee xulka qaranka England, Kieran Trippier ayaa dhammaystiray heshiiska uu ugu dhaqaaqay kooxda…
Badrudiin Mohamed	 Jul 11, 2019
Kooxaha Yurub ayaa wali si wayn ugu jira in ay suuqa kala iibsiga ka raadsadaan ciyaartoyda ay u arkaan in ay kooxahooda xoojin u noqon karaan inta aan la gaarin xili ciyaareedka cusub. Waxaan halkan idiinku soo ururinay wararkii ugu…
Inter Milan ayaa Masuuliyiin U Dirtay Weeraryahanka Romelu Lukaku Si Ay U Dhamaystiraan
Ramzi Yare	 Jul 10, 2019
Wakiilda kooxda Inter Milan ayaa todobaadkan u duuli doona Manchester United si ay u dhamaystiraan saxiixa Weeraryahanka Man United ee Romelu Lukaku sida ay sheegayaan wararka. Lukaku ayaa doonaya in uu isaga tago Man United isaga oo…
Paul Pogba U Doonayo Inuu Ka Tago Man United Xagaagan Oo La Ogaaday
Paul Pogba iyo wakiilkiisa Mino Raiola ayaa wax qarsoon ka dhigin in ciyaaryahanka uu doonayo inuu isaga tago Manchester United xagaagan. Raiola ayaa u sheegay idaacada Ingariiska ee talkSPORT in kooxda ay muddo dheer ka warqabtay dareenka…
Lindelof Ayaa Doonayo inuu Ka Tago Man United, isagoo Cadeeyay inuu Doonaayo ..
Warar maanta Soo baxay Ayaa ku waramaya daafaca Lindelof inuu Ka Tago Man United, isagoona Cadeeyay inuu Doonaayo inuu U Ciyaaro Koox Weyn, Sida Barcelona Ama Real Madrid. Wakiilka xiddiga 24-jirka ah ayaa lagu soo waramayaa inuu la…
DEG DEG: Harvey Elliott ayaa umuuqda mid ogolaaday in uu kubiiro Liverpool
Ramzi Yare	 Jul 8, 2019
Harvey Elliott ayaa umuuqda mid ogolaaday in uu kubiiro Liverpool Xiddiga 16 jirkaani ayaa xilli ciyaareedkii hada soo idladay noqday ciyaaryahan kii ugu da'da yaraa ee abid ciyaaray horyaalka Premier League kadib badal uu kusoo galay…